मन्त्री बन्ने च‘र्चा चलेका यि ब्यक्ति को हुन?:: Mero Desh
मन्त्री बन्ने च‘र्चा चलेका यि ब्यक्ति को हुन?
Published on: २० आश्विन २०७८, बुधबार ००:००
प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशम्शेर जबराको कोटामा दीपक तिमिल्सिना मन्त्री बन्न लागेको भनेर चर्चा चलेका बेला एमालेका अध्यक्ष खडेगप्रसाद ओली र तिमिल्सिनाको तस्बिर भाइरल बनेको छ ।”
“तिमिल्सिनाले ओलीसँग टीका लगाउन लागेको र आशीर्वाद लिन लागेको तस्बिर बाहिरिएपछि मोड अर्कै आएको छ । तिमिल्सिना जबराको मान्छे हुन् वा ओलीको मान्छे हुन् ? भनेर प्रश्न उठेका छन् ।”
“माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट मानिने पत्रकार जीवन विसीले ओली र तिमिल्सिनाको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमार्फत बाहिर ल्याएका छन् ।”
“पत्रकार विसीले लेखेका छन्, ‘प्रधानन्यायाधीशले भाग मागेर दीपक तिमिल्सिनालाई मन्त्री बनाउँदैछन् भन्ने हल्ला बजारमा निकै चलेको छ । यी दीपक पनि ओली बा कै रमिते छोरा हुन् । नाम अरुको बदनाम भएपनि ओलीको आर्शीवाद त निधारमै छ ।’
“ओलीका नेता राजन भट्टराईले पनि तिमिल्सिनालाई मन्त्री बनाउन लागेको चर्चाका विषयमा ट्वीटमार्फत सेटिङ भनेर कडा टिप्पणी गरेका छन् ।”
‘आखिर सत्य कुरा उजागर हुनु थियो भयो । के प्रयोजनका लागि र कसरी छ वर्षका लागि निर्वाचित सरकारलाई ढालिएको रहेछ र त्यसका लागि के कस्ता सेटिङ गरेर परमादेश, गराइइएको रहेछ भन्ने कुरा ? लडेर ल्याएको ब्यबस्था र संविधानमाथि चुनौती थपिएको छ’, भट्टराईले भने, ‘पात्र र प्रवृत्ति चिनौं र सामना गरौं ।’
“तिमिल्सिनाको सम्बन्ध ओलीसँग निकै राम्रो रहेको स्रोतले जनाएको छ । तिमिल्सिनाले ओलीका लागि काम गर्दै आएको समाजिक सञ्जालमा छरपस्ट भएको छ ।”
“तिमिल्सिना सांसद नै छैनन् । सांसद नै नभएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्री बनाउने कुरै रहँदैन । एमालेका नेताहरूले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको बदनाम गर्न विभिन्न खालका फण्डाहरू गरिरहेका छन् । छ महिना सांसद बनाउन सकिने भए पनि निर्वाचनको मुखमा तिमिल्सिनालाई मन्त्री बनाएर देउवाले कलंक बोक्ने छैनन् ।”